FETIN’NY MOZIKA TOAMASINA : Hotanterahina eo anoloan’ ny Lapan’ny tanàna
Toy ny isan-taona, dia tsy diso anjara amin’ny fanamarihana ny datin’ny 21 jona na ny Fetin’ny mozika ny Alliance française Toamasina. 18 mai 2017
Ny alahady 18 jona amin’ny 3 ora tolakandro ka hatramin’ny 7 ora hariva no hanatanterahana ny ivon-pankalazana. Hisy ny lampihazo lehibe havelatra manoloana ny ny lapan’ny tanàna. Mozika maro loko no entina hanamarihana izany.
Hanafana ny sehatra ry Welvi Waves, Warriors, Dédé Fénérive, Jean Kely sy Basth. Hamarana ny seho an-tsehatra, ny alahady 18 jona kosa i Marion. Afaka mandray anjara ihany koa ireo artista eto an-toerana. Eny amin’ny Alliance française Toamasina ny fisoratana anarana manomboka ny 15 mey ka hatramin’ny 30 mey izao.